Mahdi Guuleed oo si jees-jees ah uga jawaabay bayaankii 12-ka musharax | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Mahdi Guuleed oo si jees-jees ah uga jawaabay bayaankii 12-ka musharax
Mahdi Guuleed oo si jees-jees ah uga jawaabay bayaankii 12-ka musharax
written by Admin 11/11/2020
Ra’iisul wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay inuu aad ula yaabay war-murtiyeedkii ay sida wadajirka ah u soo saareen in ka badan 10 musharax oo sanadkan u tartameysa xilka madaxweynaha Soomaaliya.
“Waxa aan aad ula yaabay qoraal sida la sheegay ka soo baxay mas’uuliyiin ku isman murashaxiinta Madaxweynaha ee doorashada 2020/21. Qoraalkaas oo lagu duraayo Guddiyada Doorashooyinka, waxaa ka muuqday kalsooni-darro, quus iyo niyadjab.” ayuu qoraalkiisa ku yiri Mahdi Guuleed.
Qoraalka ayaan intaas ku sii daray, “Waxa aan garan waayay faraqa u dhaxeeya Guddigii Doorashada heer Federaal iyo Somaliland ee 2016 iyo kuwa 2020 oo ay labadaba kasoo dhex muuqdeen wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed oo labada xafiis u kala shaqayn jiray ama shaqeeya.”
Ra’iisul wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Guuleed ayaa qoraalkiisa ku soo gabagabeeyey, “Miyaanu arrinku ahayn “Hal” diiddani geed ay ku xoqoto ma waydo? Mise waa hawraartii Soomaaliyeed ee marka “Geela” loo heeso uu raggu “Gorayada” u heesi jiray? Wallee ina ragow talo adduun, taada uun ma’ aha.”
Mahdi Guuleed oo si jees-jees ah uga jawaabay bayaankii 12-ka musharax was last modified: November 11th, 2020 by Admin
Akhriso: Wararkii u dambeeyey doorashada madaxtinimada HirShabeelle oo maanta dhaceysa
Kheyre oo shaaciyey sida uu u arko guddiyada doorashada ee DF magacaawday
Dhageyso:-Doorasho qof iyo codkiisa kama dhici karto Dalka (Dood wadaag)
Madaxwaynihii hore ee dalka Faransiiska oo u geeriyooday xanuunka Covid-19.
Dhageyso:-Isha A iyo Boonkaay B oo Barbardhac ku kala Baxay.